🥇 accounting emtholampilo wamazinyo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 581
accounting emtholampilo wamazinyo
Ungabuka incazelo ye-franchise yethu kukhathalogi ye-franchise: i-franchise
Ividiyo ye-accounting yomtholampilo wamazinyo
Oda i-accounting yomtholampilo wamazinyo
Umsebenzi womtholampilo wamazinyo udinga ukubalwa kwezimali okuhle nokuphathwa ngesikhathi esifanele kwamakhasimende, odokotela bamazinyo nabaphathi. Isoftware yokubalwa kwemitholampilo yamazinyo uhlelo lokubala olusebenzayo olusiza bobabili abaphathi nodokotela wamazinyo oyinhloko. Ukufaka isicelo se-accounting sokulawulwa komtholampilo wamazinyo, udinga nje ukuthayipha igama lakho lomsebenzisi, elivikelwe yiphasiwedi yomuntu siqu, bese ucindezela uphawu kudeskithophu yekhompyutha yakho. Ukwengeza kulokho, umsebenzisi ngamunye we-software yamazinyo yomtholampilo wamazinyo unamalungelo athile okufinyelela, anciphisa inani ledatha umsebenzisi alibonayo futhi alisebenzise. Ukuzenzakalela komtholampilo wamazinyo kuqala ngokwenziwa kwamakhasimende isikhathi sokubonana. Lapha, abasebenzi bakho basebenzisa uhlelo lokubalwa kwemitholampilo yamazinyo ukwenza i-aphoyintimenti neklayenti. Ukuze ubhalise isiguli udinga ukuchofoza kabili ngesikhathi esidingekayo kuthebhu kadokotela odingekayo ewindini lokurekhoda lomtholampilo wamazinyo futhi ukhombise izinsizakalo ezingakhethwa ohlwini lwentengo olwenziwe ngaphambilini.
Yonke imininingwane igciniwe futhi ingahlelwa kuhlelo lokusebenza lomtholampilo wamazinyo, kucatshangelwa imininingwane yenhlangano yakho. Isoftware yokubalwa kwemali yokulawulwa komtholampilo wamazinyo inengxenye ethi 'Imibiko' elusizo kakhulu enhloko yesikhungo. Kulesi sigaba sokulawulwa komtholampilo wamazinyo, wenza imibiko ehlukile kumongo wanoma isiphi isikhathi. Isibonelo, umbiko wevolumu yokuthengisa ukhombisa ukuthi yimalini esetshenziswe kunqubo ethile. Umbiko wokumaketha ukhombisa imiphumela yokukhangisa. Umbiko wokulawulwa kwesitoko ukhombisa ukuthi iziphi izinto ezizodinga uku-oda futhi maduze ukwenza indawo yakho yokugcina impahla iphelele. Isicelo somtholampilo wamazinyo asifanele bonke abasebenzi bezokwelapha kuphela, kodwa futhi sikuvumela ukuthi wakhe ubuhlobo nabaphakeli bezimpahla, abanikazi bezindawo kanye nezinkampani zomshuwalense. Ungalanda inguqulo yamahhala yesoftware ye-accounting yomtholampilo wamazinyo kuwebhusayithi yethu. Ukushintsha inhlangano yakho ngosizo kohlelo accounting umtholampilo wamazinyo!
Ukulawulwa kwemiphumela nokuqapha kwazo zonke izinqubo kuyisihluthulelo sokwenza ukuhleleka emtholampilo wamazinyo. Ukukhula kwemali engenayo nokwehliswa kwezindleko kuzoba umcimbi ohleliwe uma ungagcini ithrekhi yemiphumela. Uhlelo lwe-accounting lubamba izinkomba kuwo wonke amaphuzu wokulawula, lwakha amandla wezinguquko nobudlelwano bomphumela, bese lubonisa imininingwane esetshenzwe ngendlela yemibiko nezincomo. Lokhu kuqinisekisa ukungaguquguquki kwemiphumela. Mayelana nokukhula kwebhizinisi - lokhu yinto noma imuphi umphathi womtholampilo wamazinyo aphupha ngayo. Cabanga ukuthi usufinyelele eqophelweni lapho ibhizinisi lakho lincane kakhulu ngaphansi kwezimo zamanje. Futhi ukwandisa ibhizinisi lakho kunengqondo kuphela ngefomethi yezitolo ezengeziwe zesevisi. Uxazulule inkinga ngokuqasha, okokusebenza, nokuqasha abasebenzi. Kepha kunenqwaba yeminye imibuzo esele: Ungaqeqesha kanjani abasebenzi, ubanike lonke ulwazi nesipiliyoni osuvele usuzuzile? Ulawula kanjani umsebenzi wabo? Uwasetha kanjani amapulani futhi uhlole imiphumela? Ukuzenzakalela kwebhizinisi kuxazulula yonke le mibuzo.
Uhlelo lwe-USU-Soft accounting lwakhiwe ngomgomo wokwehlukaniswa kwemisebenzi - kuya ngendima umsebenzi angene ngemvume ngaphansi kwayo. Kunezindima eziyisisekelo ('uMqondisi', 'uMlawuli', 'Udokotela Wamazinyo'), kodwa ngaphezu kwakho kungadala izindima nama-akhawunti kwabanye abasebenzi basemtholampilo, njenge-'Accountant ',' Uchwepheshe Wezokumaketha ',' Uchwepheshe Wokuthengiswa Kwempahla 'nokunye. Indima yokungena kuhlelo lwe-accounting inqunywa wumsebenzi, osethwe lapho kwakhiwa ikhadi ne-akhawunti (iphasiwedi yokungena kuhlelo lwe-accounting) lomsebenzi ngamunye. Ngakho-ke, udinga ukugcwalisa imininingwane mayelana nomsebenzi. Imininingwane encane edingekayo yigama lokuqala, isibongo nomsebenzi. Ukuze ucacise umsebenzi, chofoza kwesokudla kunkambu ethi 'Khetha ubungcweti' bese ufaka inketho kusuka kuhlu oluphakanyisiwe (umkhombandlela we-'Professional 'usuvele ugcwaliswe yithi esigabeni sokufakwa kohlelo lokubala, kepha ungalihlela). Uma isisebenzi sinemisebenzi eminingi, asikho isidingo sokwenza amakhadi amaningi. Kwanele ukucacisa yonke imisebenzi yakhe kweyodwa. Ukwenza lokhu chofoza kwesokudla emkhakheni wobungcweti bese ungeza inketho kusuka kuhlu oluphakanyisiwe.
Isicelo sinemibiko eminingi ekhombisa isimo sokuthuthukiswa komtholampilo wamazinyo. Umbiko we-'Cash flow 'ukhombisa ukungena nokuphuma kwemali futhi ukuvumela ukuthi ukulawule. Uma umbiko wemali wosuku ufana nombiko owenziwe ohlelweni lokubalwa kwemali, ungasho ngokuzethemba ukuthi wonke ama-oda nezinkokhelo zenziwe ngohlelo lwe-accounting, futhi nemininingwane yezezimali ingathenjwa.
Umbiko 'Wenzuzo yezindawo zomsebenzi' ukuvumela ukuthi ubone ukuthi indawo ngayinye yomtholampilo nodokotela wamazinyo bangenisa imali engakanani. Ungayisebenzisa futhi ukugcina umkhondo wezikweletu zeziguli nentuthuko, inani lezimbuyiselo, ukwelashwa kabusha ngaphansi iwaranti, inani lezinsizakalo ezikhokhisiwe, inani elikhokhelwe, namanye amamethrikhi wezezimali abalulekile. Imibiko yokuqokwa ikusiza ukuthi ubheke isikhathi sesiguli esichithwa emtholampilo. Leli yiqembu elibaluleke kakhulu lemibiko. Ukusebenza nabo kukuvumela ukuthi ufinyelele ezingeni elisha lenkonzo futhi uthuthukise ukusebenza kodokotela nabaphathi, futhi ngaleyo ndlela wandise inzuzo yomtholampilo. Umbiko 'Wodokotela' Wokulayisha 'ukhombisa ukuthi ishejuli lenziwe kahle yini, ukuthi udokotela ngamunye ulusizo kangakanani emtholampilo, nokuthi yimuphi udokotela oletha imali eningi.
Sizoba ku-inthanethi maduzane . Okwamanje, chofoza lapha ukusithumela umlayezo ngeposi
I-accounting kudokotela wamazinyo
i-accountbook logbook yamazinyo
accounting yehhovisi lamazinyo
accounting of wamazinyo
accounting of amazinyo
Ukubalwa kweziguli kumazinyo
accounting womsebenzi wamazinyo
isicelo sobudokotela bamazinyo
izinhlelo zamakhompiyutha zokuhlinzwa kwamazinyo
ukulawula emtholampilo wamazinyo
Ukuzenzakalelayo komtholampilo wamazinyo
ukuphathwa kwemitholampilo yamazinyo
uhlelo lwamtholampilo lwamazinyo
uhlelo lokulawula ihhovisi lwamazinyo
ukuphathwa kwamazinyo polyclinic
Registry kagesi for wamazinyo
ukubhaliswa kwamazinyo nokugcina umlando wezokwelapha
Ukulawulwa kwangaphakathi ku-amazinyo
kugcina umlando wezokwelapha kudokotela wamazinyo
i-accounting ebonakalayo kumazinyo
ikhadi lezokwelapha lodokotela wamazinyo
Ukulawulwa kokukhiqizwa ku wamazinyo
Uhlelo lokushintshanisa kwamazinyo
Uhlelo lwesikhungo samazinyo
Uhlelo lomtholampilo wamazinyo
uhlelo lokulawulwa kwamazinyo
Uhlelo lwehhovisi lamazinyo
Uhlelo lodokotela bamazinyo
Uhlelo lokwelashwa kwamazinyo
Uhlelo lwe-accounting kudokotela wamazinyo
ukulawulwa kwekhwalithi kudokotela wamazinyo
Ishidi lomsebenzi wokubala wamazinyo